Faahfaahin Laga Helayo Weerar Ka Dhacay Duleedka Kismaayo. – Bogga Calamada.com
Faahfaahin Laga Helayo Weerar Ka Dhacay Duleedka Kismaayo.
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in qaraxyo khasaara dhaliyay dhaliyay Kenyaati ah maleeshiyaad katirsan maamulka ‘Jubaland’ lagula beegsaday duleedka magaalada Kismaayo.
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay Mas’uuliyadda qaraxyada sida ay baahisay idaacadda islaamiga Andalus ee Afka Xarakada ku hadasha, mana ahan markii ugu horraysay qaraxyo ka dhanka ah cadawga shisheeye ay ka dhacaan deegaannada dhanka Waqooyi uga beegan Kismaayo.
Dhanka kale weerarkan ayaa imaanaya xilli saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Shabaabul Mujaahidiin dagaal culus ay ku qaadeen saldhiga ciidamada Kufaarta Afrikaanta ay ka sameysteen degmada Baraawe ee gobalka Shabeelada Hoose.
Inta la xaqiijiyay dagaalkan waxaa lagu dilay Labo askari oo Ugandeys ah tiro kalane oo isla ciidamada Kufaarta Uganda ah waa lagu dilay dagaalkaasi ka dhacay degmada Baraawe.